FIFA Soccer: Beta 13.0.05 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 13.0.05 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား အားကစားမ်ား FIFA Soccer: Beta
FIFA Soccer: Beta ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ, စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဖီဖာမိုဘိုင်း၏လာမည့်ရာသီပေါ်မှာငါတို့ developer များမှတုံ့ပြန်ချက်များကို! ဤသည် Beta ကိုငါတို့ဂိမ်းမှတိုးတက်မှုများအောင်ကူညီပေးသည်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့အစေးရန်နှင့်ကစားသမားများဖြစ်နိုင်ကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်သေချာ။ ဒီနောက်ဆုံးဂိမ်းမဟုတ်သည်အတိုင်း, ကိုယ်တိုးတက်မှုအတွက်ရာသီသစ်ကူးသယ်ဆောင်သို့မဟုတ်သင့် core ကိုဂိမ်း Ultimate Team မှအထောက်အကူဖြစ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါပေးပါ။ အောက်တွင်သင်စမ်းသပ်ဗားရှင်းနှစ်ခုအခန်းကြီးထဲမှာမြျှောလငျ့နိုငျအဘယ်အရာကိုခြုံငုံသုံးသပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဆုများရရှိရန်ဌာနမှူးမှ Vs တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဦးခေါင်းကနေတဆင့်အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ် AI အဆန့်ကျင် 11v11 ပွဲ Play ။
အပြီးအစီးဆုကြေးငွေရည်ရွယ်ချက်များ, အမှတ်သင်ပုန်းအချက်များကိုဝင်ငွေ, သင်၏ OVR အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းခြောက်နာရီ, သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဆုလာဘ်လက်ခံရရှိသည်။
•သင့် Ultimate Team ကစားသမားကိုတက်ညှိပြီးမရနိုငျသျောလညျးသငျအသစ်ကကစားသမားဝင်ငွေအဖြစ်, သူတို့ကသင့်ရဲ့အဖွဲ့ပိုကောင်းအောင်နှင့်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဖလှယ်မှုနိုင်ပါသည်
•ဓာတုဗေဒ, အခွင့်အရေး, ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်, level, အချို့ filters တွေကို disable လုပ်ထားတယ်
•အဆိုပါ Store ကိုနှင့်စျေးကွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
•အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ, ဖိနပ်, ဘောလုံးနှင့်လက်အိတ်များအပါအဝင်ဖီဖာမိုဘိုင်း၏လက်ရှိရာသီမှဖြစ်လိမ့်မည်
ဒီ app: တစ် persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ ဒီ app ဂိမ်းစင်တာကိုအသုံးပြုသည် 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ သငျသညျမိတျဆှမြေားနှငျ့သငျ့ဂိမ်းကစားမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းစင်တာကနေ log out ။
FIFA Soccer: Beta အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FIFA Soccer: Beta အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FIFA Soccer: Beta အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
FIFA Soccer: Beta အား အခ်က္ျပပါ
meeldeeb စတိုး 4.41k 1.56M
FIFA Soccer: Beta ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FIFA Soccer: Beta အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 13.0.05
App Name: FIFA Soccer: Beta
FIFA Soccer: Beta APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ